Tao amin’ny fetiben’ny mpamaham-bolongana indoneziana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Oktobra 2009 19:18 GMT
Vakio amin'ny teny polski, Nederlands, 繁體中文, 简体中文, বাংলা, Swahili, Español, English
Nanana sehatra fanafamafisan'orina ny fiaraha-mientana hamaham- bolongana i Indonezia. Nahasarika mpamaham-bolongana sy mpitia teknolojia avy amin'ny vazantany efatr'ity firenena midadasika ity ny fetiben'ny mpamaham-bolongana (Pestablogger) fanao isan-taona any Indonezia.
Fahatongavana maro hanatrika ny fetiben'ny mpamaham-bolongana Indonezia
Sehatra hita tamin'ny fetiben'ny mpamaham-bolongana.
Fanintelony izao no nanatontosana ity hetsika fanao isan-taona ity ary mahafinaritra ny mahita ny fitomboan'isan'ny mpandray anjara isan-taona.
Tsy vitan'ny mitsinjara eo amin'ny lefiny jeografika ihany ny mpamaham- bolongana Indoneziana fa eo amin'ny fahasamihafan-taona sy asa fanao ihany koa.
Fotoana iray niresahana ny etikan'ny famahanam- bolongana
Fotoana iray niresahana ny fampitam-baovao ataon'olo-tsotra
Olom-pirenena mampita vaovao iray mizara ny traikefany amin'ny mpamaham- bolongana
Fotoana iray fampifandraisan-tanana an'i indonezia misaratsaraka amin'ny alalan'ny famahanam- bolongana. Niresaka ny fomba iseraseran'i Indonezia amin'izao tontolo izao [zary] ivelany amin'ny alalan'ny bolongana ihany koa ny mpandray anjara.
Tristam(misolo tena ny fikambanana mpanohana), Chip (mpankafy teknolojia avy any Vietnam) ary Retty (mpamaham-bolongana Indoneziana) eo am-piresahana. Tsy dia ahitana loatra ny fandraisana anjaran'ny vahiny tahaka ny mpitranga any amin'ny hetsika Kambojiana na thailandey ny hetsika Indoneziana. Mbola misy ihany ny olona liana tsiraidraika mitsiritsirika ary manantena izahay fa ho maro kokoa amin'ny manaraka ny olona avy amin'ny faritra atsimo atsinanan'i Azia no ho tonga.
Mpanakanto batik eo am-panamboarana ny t-shirt-n'ny fetiben'ny mpamaham-bolongana.
Mpamaham-bolongana maka rivotra avy amin'ny fiadian-kevitra ka mankafy mihira.